Warshad daweynta baarkooda N, baarayaal - Shiinaha Soo-saareyaasha daaweynta sunnayaasha N
OEM Your Brand Vegan Eyelash eye serum Nutrition lash kordhin Liquid loogu talagalay curlida iyo jeedal dheer
Waa maxay ? Gaar ahaan loogu talagalay dadka leh indhashareer jilicsan sababtoo ah isticmaalka muddada-dheer ee mascara iyo baarkooda been-abuurka ah, sheygan ayaa firfircoon kara unugyada xididdada indhaha, toosiya baarkooda, ku dar nafaqada u yeelashadaada, ka caawin kara jeedalku inuu noqdo mid sii ballaadha oo dhalaala, baarkooda iyo kahortaga jabka indha-indheynta, ka dhig jeedalku caato cufan, oo si wax ku ool ah u xallin kara dhibaatooyinka gaagaaban, jaalle, jilicsan iyo kuwa kale ee caadiga ah. Foomka Xanaaqa Sare ee Bilaashka ah ee Jeedh dhaadheer iyo Dhumuc leh & ...
Astaanta Gaarka ah ee kor u qaadista calaamadaha indha indhaynta sii kordhaya ee kororka dhiiga ee dhuminta iyo foorarka
Waa maxay sababta loo doorto serum koritaanka baarkooda? Baarkooda dhaadheer oo buuxa iyo sunnayaasha, runti waa muuqaalka xilligan, laakiin dadka qaar, maahan muuqaal aan si caadi ah ugu guuleysan karno gaar ahaan dadka qaba baalasha jilicsan sababo la xiriira isticmaalka muddada dheer ee mascara iyo baarkooda been abuurka ah, dhuuban jeedalku waa riyooyinkooda. Marka indha-indheheena iyo serum-yada kobaca sunnayaasha waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad ka dhabeyso riyadaada. Waa maxay kobaca baalasha ilmuhu awood u leeyahay? Waxaa lagu diyaariyey maaddooyinka ugu wanaagsan ee aynnu sii wadi doonno ...
Calaamadaha Gaarka ah ee eyebrow Waxyeele Waxsoosaar dabiici ah brow Kobaca nafaqada ee dareeraha dareeraha
Maxaad ugu baahan tahay kor u qaadista sunnayaasha? Baaruhu waa aag timo gaagaaban oo ka sarreeya isha oo raacaya qaabka cirifka hoose ee geesaha naaska xayawaannada qaarkood. Shaqadooda ugu weyn waa inay ka hortagaan dhididka, biyaha, iyo qashinka kale inay ku dhacaan godka isha, laakiin sidoo kale waxay muhiim u yihiin xiriirka aadanaha iyo muujinta wajiga. Waa wax iska caadi ah dadku inay wax ka beddelaan sunnayaasha iyagoo adeegsanaya timo saarid iyo qurxin. Taas oo macnaheedu yahay kor u qaadista suniyaha ayaa ah hab wanaagsan oo kuu keeni kara daawo ...